Redmi K20 waxaa si rasmi ah loo soo bandhigi doonaa 28-ka Maajo | Androidsis
Maalmo ka hor ayaa shaaca laga qaaday in Dhamaadka-sare ee Redmi horeyba wuxuu u lahaa magac. Magaca ay doorteen magaca Shiinaha waa Redmi K20, tusaalahan ugu horeeya ee laga bilaabay qaybta dhamaadka-sare. Dhowr bilood ayaa laga joogaa markii aan maqalnay xan badan oo ku saabsan taleefankan, kaas oo yeelan doona Snapdragon 855 oo ah processor-ka gudaha. Isla todobaadkan xogta ayaa timid ku saabsan kamaradda qalabka.
Hadda, hore ayaan u ognahay goormaan filan karnaa Redmi K20-kan la soo bandhigi doono si rasmi ah. Dhamaadka-dhamaadka-sare ee sumadda Shiinaha ayaa horay u soo bandhigtay Shiinaha. Ku saabsan bilawgeeda caalamiga wali wax cad ma jiraan, waxaana jira warar badan oo ku saabsan.
Ma sugi doonno waqti dheer, maxaa yeelay sida lagu xantaa, munaasabadda soo bandhigidda waxay dhici doontaa Maajo. 28-ka May waa maalinta la xushay soo bandhigida Redmi K20. Waxay noqon doontaa dhacdo ka dhacda Beijing oo aan ku kulmi doonno taleefankan nooca Shiinaha ah. Waxaa loo dabaaldegaa siddeedda subaxnimo (waqtiga Isbaanishka).
Xilligan la joogo waxba ma ogin ku saabsan bilawga caalamiga ah ee taleefankan. Waxaa jira shaki badan oo ku saabsan, maaddaama ay jiraan warar la isla dhex marayo oo sheegaya in laga bilaabi karo meel ka baxsan Shiinaha sida Pocophone F2, jiilka labaad ee nooca kale ee Xiaomi. In kastoo aysan jirin wax ilaa iyo hadda la xaqiijiyay.
Xaqiiqdii maalmahan waan tagnaa waxbadan ka ogaashada qorshooyinka gaarka ah ee shirkada. Sikastaba xaalku ha ahaadee, waxaan kaliya sugeynaa siddeed maalmood illaa iyo inta uu Redmi K20 durbaba rasmi yahay. Markaa markaa waan ogaan doonnaa haddii dhab ahaantii laga bilaabayo meel ka baxsan Shiinaha iyada oo loo marayo astaanta Pocophone ama in kale.
Redmi K20-kan wuxuu ballan-qaadayaa inuu yahay taleefan xiiso leh, oo ah soo-gelinta astaanta ugu sareysa. Heerka dhexe ee astaanta ayaa si aad ah u iibinaysa, iyadoo ay xusid mudan tahay lambarka 7aad. Marka waxaan rajeyneynaa inaan aragno waxa ay noo keyd u yihiin qeybihiisa sare. Maaddaama ay awood u leedahay in wax badan laga jeclaado suuqa.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Redmi K20 horeyba waxay u laheyd taariikhda soo bandhigida
Maxaa ku dhacaya Huawei hadda markay ka dhammaato Android